Archive du 20200408
88 no voan’ny Coronavirus Marary vaovao 6 tao anatin’ny roa andro
Niakatra ho 88 ireo voamarina fa voan’ny coronavirus eto Madagasikara. Ny 54 amin’ireo dia avy any ivelany na “cas importé”, ary efa 34 kosa ireo tsy nivoaka teto,
Be loatra ny ahiahy tsy hihavanana
Tsy lavina fa ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika Malagasy amin’izao fotoana izao. Samihafa ny hamehana na ny “Etat d’Urgence”
Andrana amin’ny vaksinin’ny Coronavirus Mbola tsy miditra amin’izany i Madagasikara
Niteraka resabe ny mikasika ny vaksiny hiadiavana amin’ny Coronavirus, ka ao anatin’izany ilay hoe aty Afrika no hanaovana fanandramana voalohany.
Arovava Hampianarina ny olon-drehetra ny fanamboarana azy
Na dia ireo firenen-dehibe nandalovan’ilay tsimok’aretina coronavirus aza dia tsy nahavita nizara maimaim-poana arovava ho an’ireo olona rehetra ao aminy.
Fepetra ara-toekarena Miandry ny tena fampiharana azy ireo mpandraharaha
Maro ireo mpandraharaha eto amin` ny firenena no miandry tohana avy amin` ny governemanta manoloana ny fiparitahan` ny aretina Covid-19.
Call Center Miditra anaty krizy ihany koa
Saika miroso tsikelikely anaty krizy avokoa ireo orinasa misy ankehitriny. Amin’izao fotoana izao dia efa tsy maintsy nirosoana ny fanenana mpiasa amin’ireo orinasa Call Center sasany.
Tafiakatra 80 000 ny olona maty Miisa 1 407 123 ny olona tratry ny coronavirus maneran-tany, raha ny isa azo omaly alina tamin’ny 10 ora sy sasany.
Fikambanan` ny Sinoa-Malagasy Kinga amin’ny fizarana fanampiana
Nanolotra fanomezana iatrehana ny COVID-19 ny fikambanan` ny Sinoa-Malagasy omaly.
Fianarantsoa, Toamasina, Ambatomanga Samy narahi-maso akaiky, hoy ny Minisitry fahasalamana
Fanaraha-maso ny marary, fanairana, miasa, mandray an-tànana ireo marary. Tanjona ny hitiliana malaky ny tsimokaretina, hoy ny Minisitry ny fahasalamana Ahmad Ahmad raha nanontaniana momba ny paikady hiatrehana ny coronavirus.
Coronavirus teny Ampitatafika Mbola tsy fantatra marina izay toerana nisy ilay marary
Nitondra fanazavana mahakasika ilay toerana nahitana ilay olona voalaza fa mitondra ny tsimok’aretina coronavirus omaly ny Ben’ny tanànan’Ampitatafika Atoa Rado Ramparaoelina.
Ady amin’ny COVID-19 Nanome tolo-kevitra fohy sady mazava ny HVM
Napetraka ny fepetra momba ny fihibohana na “confinement” nefa fitangoronana no nateraky ny fitsinjarana vatsy sy tsena mora,
Fisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina Maika ny fampihenana ny isan’ireo migadra
Tsy tokony hitaredretra intsony ny governemanta Malagasy ny amin’ny fampihenana faran’izay haingana ireo Malagasy anya m-ponja hisorohana ny fihanaky ny aretina Corona virus hoy ny fanambarana nataon’ny Amnesty International.
Mahajanga Hatao "mise en quarantaine" ireo olona mody
Taorian'ny nanambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady alina teo ny hanohizana 15 andro imdray ny fihibohana eto amintsika sy namoahany ny fanapahan-kevitra ny hamelana an'ireo olona mipetraka sy miasa any amin’ireo
Fiatrehana ny Covid-19 Mila atao mangarahara kokoa
Amin’izao fandalovana anaty krizy lalina izao no hitarafana ho hatraiza ny fahaiza-manaon’ny fitondram-panjakana ?
Dr Berija Ravelomanantsoa “Misy mamitaka ny filoham-pirenena”
Henontsika fa misy ny atao hoe TDR, izay fitsapana atao ao anaty 15 minitra. Alaina ny ra dia jerena ao ny hery fiarovana.
Depiote Jean Michel Henri « Fahendrena ny fanitarana ny fihibohana”
Mankatoa tanteraka ny fanapahan-kevitra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny depiote Jean Michel Henri amin` ny fanitarana 15 andro ny fihibohana eto Antananarivo, Toamasina ary Fianarantsoa. « Fahendrena izany.
EPP AMBATOMANGA Tsy nisy voan’ny Coronavirus ireo mpianatra 50 notiliana
Efa vita fitiliana avokoa ny 50 isa tamin’ireo mpianatra miisa 104 manovo fahalalana eo anivon’ny sekoly ambaratonga fototra Ambatomanga, distrikan’i Manjakandriana.